Beesha H'MONG oo ka kooban 54 kooxo qowmiyadeed ah oo ku nool Vietnam - Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Vietnam
Tisagu H'MONG wuxuu leeyahay dad ka badan 896,239 oo ku nool deganaanshaha gobollada buuraleyda dhaadheer ee gobollada Ha Giang1, Tuyen Quang2, Lao Cai3, Yen Bai4, Lai Chau5, Dien Bien6, Son La7, Cao Bang8, Thanh Hoa9 iyo Nghe An10. Dhawaan, waxay u haajireen Xarumaha Dhexe ee Dhexe iyo qaybta bari Koonfurta Vietnam. Waxay leeyihiin dhowr koox-hoosaadyo maxalli ah: H'mong Trang (White H'mong), H'mong Hoa (Ubaxa H'mong), H'mong Do (Casaan H'mong), H'mong Den (Madow H'mong), H'mong Xanh (Buluug H'mong). Magacyadooda kale waa Piss iyo Mieu. Luqadda H'MONG waxaa iska leh H'mong-Dao11 group.
Formerly, H'MONG wuxuu inta badan ku noolaa beero-iyo-bum abuurista. Waxay beeraan bariis iyo com. Meelaha qaarkood, waxay kaloo nadiifiyaan beero dhul ah. Dalagyada quutal daruuriga ah waa com, bariis iyo galley. Waxay ka baxaan dhirta linenka ah si ay u siiyaan fiilooyin loogu talo galay tolidda iyo dhirta daawada. H'MONG rea lo'da, eeyaha, cowska iyo digaagga. Waagii hore 'H'MONG' wuxuu uureeyay in xanaanada xoolaha ay fuliyaan haween ugaarsiga kayntuna ay tahay mid ragga masuul ka ah. Waqtigan xaadirka ah Gargaarka Gobolka, 'H'MONG' waxay ku guuleysteen inay horumariyaan beerashada-bariiska qoyan, abuurka dalagyada warshadaha, iyo beerta iibka. Noloshooda si weyn ayaa loo hagaajiyay. Tumaalistooda iyo tolidda dharka aad baa loo yaqaan.
Twuxuu HMMONG ka sameeyaa dhar dhaqameedkooda maro linen isku filan. Dharka haweenka ee soo jireenka ahi waxay ka kooban yihiin goonno, gogol ka furan gadaasha hore iyo gogosha hore iyo lebbiska. Koolarka midabada midabka leh lagu qurxiyo ayaa ah gabal maro ah oo garbaha ku dhacaya. Goonadooda gogosha isku laaban ayaa si ballaadhan loo tolay loona qurxiyey. Xilligan, dad badani waxay iibsadaan dhar diyaar u ah inay xidhaan. Waa caqiido guud oo ka mid ah 'H'MONG' in dadka isku isirka ahi ay ku dhalaan kuna dhintaan guriga midba midka kale, waana inay is caawiyaan oo is taageeraan. Nasab kastaa wuxuu ku urursadaa koox deegaan, madaxeedu wuxuu qaataa arrimaha guud.
Yragga iyo dumarku waa u xor inay doortaan lamaanahooda. Guurka gabi ahaanba waa mamnuuc ragga iyo dumarka isku isirka ah. Sida ku xusan dhaqan la yiraahdo "Haypu", wiil iyo gabar aan awoodin guurka, waxay awoodi karaan, heshiiskii waalidkood, inay iskula aadaan midba midka kale meesha uu ninku gabadha geeyo gurigiisa si ay u noqoto xaaskiisa. Nolosha guurka ee 'H'MONG' waa is waafaqsanahay. Furriinku waa qaddar.
Tdabaaldega seddex maalmood ee Sanadka Cusub ee H'MONG waxaa la abaabulaa Disembar kasta. Way iska daayaan cunista khudradda inta lagu guda jiro munaasabadda. Qalabka muusikada wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo tuubbooyin iyo dibin-daab leh. Si aad ugu raaxaysato guga iyo maalin shaqo ka dib. ragga iyo dumarka dhalinyarada ah badiyaa waxay ciyaaraan tuunbo-tuubbo iyo dibin-daab si ay u muujiyaan dareenkooda uguna yeeraan lamaanahooda.
Deegaanka H'MONG ee gobolka Thanh Hoa (Xigasho: Daabacayaasha VNA)
(Booqday jeer 1,255, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 2,076
← Beesha PU PEO ee 54 qowmiyadeed ee Vietnam
Beesha HRE ee 54 qowmiyadeed ee Vietnam →